Muvaki mukuru weLinux Kernel ndiye ... Microsoft | Linux Vakapindwa muropa
Muvaki mukuru weLinux Kernel ndi ... Microsoft
Chimwe chezvinhu zvakanaka nezveGnu / Linux ndechekuti hazvitsamire pane imwe kambani kana musimudziri. Iko kusununguka kwekodhi kunotibvumidza isu kuti tikwanise kutora kugovera kana iyo chinhu cheGnu / Linux uye kukwanisa kuidzokorora, kuigadzirisa kana kuigadzirisa isu mukuda kwedu.
Izvi zvakabvumira vasingazivikanwe vashandisi kutyaira Gnu / Linux kuvandudza asiwo kuti pane makambani matsva akakomberedza ino sisitimu inoshanda. Asi nguva pfupi yadarika, nekuda kweiyo InfoWorld kudzidza, isu takadzidza izvozvo makambani akazvimiririra ari kuve nekukosha mukati mekuvandudzwa kweiyo kernel yeGnu / Linux uye Linux senge sarudzo yenyika yepasirese.
Sezvineiwo, kambani inopa zvakanyanya ndeyeMicrosoft. Iyo hombe yekudyara software hofori inopa mipiro dzakasiyana siyana kune akasiyana Gnu / Linux mapurojekiti, kusanganisira kernel. Mukati mechikwata che kernel, Microsoft inobhadhara iyo mibairo kune gumi nevaviri vanogadzira timu, iri imwe yemakambani anopa zvakanyanya kuLinus Torvalds kernel. Izvi hazvireve kuti Microsoft inoronga kugadzira Linux-yakaita kernel kana kuti inosora paLinux Torvalds, asi kuti irikubatsira kugadzira matekinoroji ayo akakodzera kana angangove akagadziridzwa kumaseva eGnu / Linux.
Microsoft ndiyo hombe asi kwete iyo yega. Google neIntel ndiwo mamwe makambani makuru anobatsira iyo Gnu / Linux system uye iyo Linux kernel. Chinangwa chemakambani aya chinoramba chakangofanana nechinangwa cheMicrosoft. Nekudaro, chinhu chikuru cheGoogle hachisisiri injini yekutsvaga asi Android, sisitimu yekushandisa iyo yakavakirwa paLinux kernel.
Kernel yakachengetedzeka uye yakagadziridzwa mukana wakanakira Google uye nhare dzayo. Intel haina mabhenefiti akakura mukombuta yedesktop, asi muchikamu chemaseva nemidziyo inotakurika, saka ivo vari kushingairira kusimudzira kernel.
Asi hazvisi zvese zvakanaka sezvazvinoratidzika. Aya makambani anogara achitarisa kune zvavanofarira uye izvi zvinogona kukanganisa kuvandudzwa kweGnu / Linux, ndosaka hatifanire kuregera budiriro yakazvimirira, kukura kunonyanya kukosha Iwe haufunge kudaro?
Kunobva - Infoworld
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Muvaki mukuru weLinux Kernel ndi ... Microsoft
Kana munhu akaverenga panobva chinyorwa chacho:
"Ichokwadi ndechekuti Microsoft, yakavhurwa sosi inorema zvayakaita, haikwanisi kutsemura Vepamusoro 30 vanopa kune Linux kernel, sekutaura kweLinux Foundation mushumo wapfuura."
Chinyorwa chekutanga chinotaura nezvezvimwe zvirevo zvinoti mupiro weMicrosoft wakakosha kwete huremu hwayo asi hunyanzvi, zvisinei hazvo zvinoratidza kuti zvinokwanisika:
"Kunyangwe izvi zvingave zvekukakavadzana, Microsoft yachinja zvakanyanya zvekuti vazhinji vedu tingangofunga chirevo ichi."
Chinyorwa chinovhura musuwo weMicrosoft kuti ivandudze zvakawanda neLinux mune ramangwana, asi haitaure kuti nhasi nhasi, kana kutovharika.
Timeo Danaos et dona ferentes. Itya vaGiriki kunyangwe vakakuunzira zvipo.
Iyo "Linux kernel"? Asi kana Linux iri chaizvo kernel! ...
Zvinoshamisa sei kuti webhu inonzi "Linux vakapindwa muropa" uye ine mhando iyi yekuvhiringidzika.
Pindura kuna C
Kleine hassler akadaro
Izvi zvine zita rakashata, sezvandinoona muLinux Foundation mipiro yeMicrosoft iri pachinzvimbo makumi maviri, ndinofunga misoro iyi haisiyo, munyori anofanirwa kugadzirisa.
Pindura Kleine Hassler
Ini ndinofunga izvi zvinokodzera kunge yero. Dai Microsoft yaizogadzira, zvaizoita saizvozvo neWindows, asi hazviite.
Nyaya ine gakava, uye zvino ko fanalical linux Taliban icharevei? Kuti iyo kernel nezvose zvivakwa zvayo zvinogona kuchengetedzwa nenharaunda uye isingade makambani akazvimirira? Ehe senge nooo! Dai mumwe nemumwe wedu akapa mari zvakanyanya kuLinux Foundation, kudesktop yatinoshandisa uye kuchishandiso chatinofarira, hatingave tichivimba nemipiro iyi yega. Iyo nharaunda inoda kuti zvese zvive zvakasununguka uye inozopopota kana ikasashanda zvakakwana.
Zuva rakaipa, huh? ... Zorora, izvo zvinotibata isu nguva nenguva. Zvichapfuura. Nenzira, Microsoft "haichengetedze" iyo kernel inongobatanidza zvikamu zvinoifarira kuti iwirirane nemaseva uye nemamiriro ayo ecosystem anotsamira pamaseva iwayo. Iyo Linux kernel inochengetwa nechikwata chinotungamirwa naLinus Torvalds.
Taliban linux vanonyanyisa? Akadaro fanatic Windowsero Taliban ... Zvakanaka, kusvikira zvino vanga vakuita (gara pasina kuda Micro $ oft) ... Uye nenzira, sekuudzwa kwawakaitwa Micro $ haigadzirise chero chinhu, inongoedza kuita software yayo inoshamisa inoshanda mushe pamasekonzi eGNU / Linux zvichibva pakuipuruzira kusvikira vaisiya seyakagadziridzwa sezvinobvira, asi usatombotenderedza, ivo havagadzi chero chinhu ... Kunze kwemushandisi akasungwa maoko nemakumbo nemuridzi OS kune yepakati ...
Ini handiwanzo tarisiro isina tariro, asi ... dzvinyu, dzvinyu
Ini pachangu ndakamboshandisa Windows zvisati zvaitika, ndakakwezvwa nepfungwa yekuchinjira kuLinux, makore mashoma apfuura ndakachinjira kuLinux uye ikozvino ndoona kuti Windows yave kutoisa chipunu chayo muLinux iyo nhau dzakaipa, ndinovimba yasara sebasa remahara uye pasina ruoko nhema.